နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်)အတွက် ငွေကျပ် ၁ဝ၈ ဒသမ ၅ သိန်းနှင့် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ကယားပြည်န?? - Yangon Media Group
နည်းပညာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်)အတွက် ငွေကျပ် ၁ဝ၈ ဒသမ ၅ သိန်းနှင့် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ကယားပြည်န??
အခမ်းအနားတွင် ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ် ဖောင်းရှိုက အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက တက်ရောက်လာ သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန် ထမ်းမိသားစုများ၏ တင်ပြချက် များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအ လိုက် ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်ပေး မည့် အခြေအနေများအား ရှင်း လင်းဖြေကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက နည်းပညာတက္က သိုလ် (လွိုင်ကော်)အတွက် လိုအပ် လျက်ရှိသည့် မိတ္တူကူးစက်တစ်လုံး အတွက် ငွေကျပ် ၁၂ ဒသမ ၅ သိန်း ၊ လူသွားစင်္ကြံအမိုးဆောင် ရွက်ရန်အတွက် ငွေကျပ် သိန်း ၂ဝ ၊ Desktop ကွန်ပျူတာ ငါး စုံအတွက် ငွေကျပ် ၃၇ ဒသမ ၅ သိန်း၊ Aircon သုံးလုံးဝယ်ယူ ရန်အတွက် ငွေကျပ် ၂၁ သိန်း၊ ရူပဗေဒဌာန လက်တွေ့ခန်းသုံး ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် ငွေကျပ် ငါး သိန်း၊ အမှုထမ်းဝန်ထမ်းများ သာ ရေးနာရေးရန်ပုံငွေအတွက် မ တည်ငွေကျပ် ငါးသိန်းနှင့် လုံခြုံ ရေးဝန်ထမ်း ငါးဦးအတွက် ဝတ်စုံ တစ်စုံလျှင် ငွေကျပ် ၅ဝဝဝဝ နှုန်း ဖြင့် ငွေကျပ် ၂ ဒသမ ၅ သိန်း၊ Civil ဌာန စာတမ်းများ ဆောင် ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ငွေကျပ် ငါးသိန်း စုစုပေါင်းငွေ ကျပ်၁ဝ၈ ဒသမ ၅ သိန်းနှင့် မော်တော် ယာဉ်တစ်စီးအား ထောက်ပံ့ပေး အပ်ခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန် ဂြိုဟ်တုနှစ်လုံးအား တရုတ် ဒရုန်းဖြင့် လွှတ်တင်ရေး စခန်းမှ လွှတ်တင်